Idatha yokuziPhatha kweDijithali: Eyona Mfihlo igcinwe ngokuGqwesileyo kwiChord efanelekileyo kunye noGen Z | Martech Zone
Ezona ndlela zokuthengisa ziphumeleleyo zixhaswa kukuqonda okunzulu kwabantu eziyilelwe ukuba bafikelele. Kwaye, ngokujonga iminyaka yobudala yenye yezona zixeliweyo zixhaphakileyo ngomahluko kwisimo sabo sokuziphatha kunye nokuziphatha, ukujonga ngelensi yokuvelisa sele kuyindlela eluncedo yokuba abathengisi bamisele uvelwano kubaphulaphuli babo.
Namhlanje, abenzi bezigqibo abathathe izigqibo ngokujonga phambili bajolise kuGen Z, owazalwa emva ko-1996, kwaye kunjalo ngokufanelekileyo. Esi sizukulwana siya kulolonga ikamva kwaye kuqikelelwa ukuba sele benako kangangoko $ 143 billion ekusebenziseni amandla. Nangona kunjalo, inani elingazange labonwa ngaphambili lophando oluphambili nolwesibini oluqhutywa kweli qela alibonakali ngathi liya kude ngokwaneleyo.
Ngelixa kusaziwa ngokubanzi ukuba iGen Z imele abemi bedijithali bokuqala bokwenyani, iindlela eziqhelekileyo ezithathiweyo zokufumanisa iimfuno zabo kunye neminqweno yabo azisixeleli imisebenzi yabo yedijithali. Ukucacisa iindlela zokuthengisa kwikamva eziya kuthi zixhomekeke ekuqondeni ngokupheleleyo aba bantu, nto leyo eyazisa isinyanzelo: Amabhaso kufuneka andise umbono wabo wolwakhiwo lovelwano ukuze baphendule kwimicimbi edijithali kakhulu yesi sizukulwana.
UGen Z kwiXabiso loBuso
Sicinga ukuba siyazi Umfu Z. Esona sizukulwana sahluke kakhulu okwangoku. Ukuba bayomelela, banethemba, banamabhongo kwaye bajolise kwikhondo lomsebenzi. Bafuna uxolo kunye nokwamkelwa kwabo bonke, kunye nokwenza ngcono umhlaba. Ukuba banomoya wokurhweba kwaye abakuthandi ukubekwa ebhokisini. Kwaye, ewe, ukuba bazalwa beneselfowuni esandleni. Uluhlu luyaqhubeka, kubandakanya uphawu olungenakuphikiswa lokuba ukufika kwexesha lobunzima ngexesha le-COVID-19 kuya kushiya kwesi sizukulwana.
Nangona kunjalo, inqanaba lethu lokuqonda elikrwela kuphela umphezulu ngenxa yezizathu ezibini eziphambili:
Ngokwembali, ukuqonda kwizizukulwana - kunye namanye amacandelo wabathengi-ubukhulu becala bacholwa ngokwendlela eqikelelweyo kunye neempendulo zophando. Ngelixa iindlela zokuziphatha ezichaziweyo kunye neemvakalelo zibalulekile ekufakweni, abantu bahlala bezabalazela ukukhumbula imisebenzi yabo yexesha elidlulileyo kwaye abanakuhlala bechaza iimvakalelo zabo ngokuchanekileyo.
Inyani yento yile yokuba uGen Z akazazi nokuba bangobani okwangoku. Ubuni babo yinto ekujolise kuyo njengoko bephakathi kwelona nqanaba lihle kakhulu ebomini babo. Ukuchazwa kwabo kuya kutshintsha ngokuhamba kwexesha-ngakumbi kunakwizizukulwana ezidala, ezizinzileyo.
Ukuba sijonga Millennials kwaye siyifumene njani ngokungalunganga ngaphambili, iziphene kwiindlela zelifa ekufundeni ngezizukulwana ziyabonakala. Khumbula, ekuqaleni babebhalwa njengabantu abanomsebenzi ombi kunye nokungabikho kokunyaniseka, nto leyo ngoku esaziyo ukuba ayiyonyani.
Ukumba nzulu ngeDatha yokuziPhatha kweDijithali
Ukulinganisa ubukhulu beGen Z ikhona ekudibaneni kwedijithali kunye nokuziphatha. Kwaye enkosi kwinkqubela phambili yezobuchwephesha, okokuqala ngqa okoko kuye kwafundwa izizukulwana, abathengisi banofikelelo kwidatha yokuziphatha etyebileyo ebonelela ngefestile yokwenyani kwimisebenzi ye-Intanethi yeGen Z ngeenkcukacha ezintsonkothileyo. Namhlanje, amawaka abantu 24/7 yokuziphatha yedijithali ngokungacacanga, kodwa kuvunyelwe, kulandelwa umkhondo.
Idatha yokuziphatha yedijithali, xa idityaniswa kunye nedatha engaxhunyiwe kwi-intanethi kunye nedatha echaziweyo, yenza umfanekiso opheleleyo, wesitayile esinqamlezayo sabantu abajikeleza ntoni kwaye kutheni. Kwaye xa ufumana olu luvo lupheleleyo, ufumana ubukrelekrele bokwenyani obunokuthi busebenze kubo ubuchule bokuthengisa.
Nazi iindlela ezimbalwa zedatha yokuziphatha yedijithali enokunceda ekuphakamiseni ukuqonda kunye nokuchaneka kwengqikelelo malunga noGen Z-okanye naliphi na icandelo labathengi-nokuba uqala ngaphi kulwazi.
Ukujonga okwenyani: Ukufumana ukuqonda kubaphulaphuli ongazi nto malunga nabo, kunye nokujonga amathumbu ukuba ungabahlola ngakumbi na. Umzekelo, unokuphanda udidi kunye nabangeneleli bohlobo. Kwaye ungafunda ngendlela abaziphatha ngayo ngokwamanani abathengi abaphelelwe ngamanani.
Inqanaba elitsha: Yongeza izendlalelo kubaphulaphuli sowuyayazi into, kodwa ayonelanga, malunga. Ukuba unamacandelo aphambili kunye nee-personas esele zisekiwe, ukwazi ukuba benza ntoni kwi-intanethi kungatyhila indawo ezingalindelekanga zamathuba.
Ukulungiswa: Ukufumanisa ukwahluka kwiimpendulo ezichaziweyo-kubaluleke kakhulu kwimeko apho abantu basilelayo ukuyikhumbula ngokuchanekileyo imisebenzi yabo yexesha elidlulileyo.
Ukwazi ngokuqiniseka ukuba abathengi bazibandakanya njani kubume bedijithali obunamandla, ngakumbi kwintengiso yedijithali. Ukubonakaliswa kwiindawo eziqhelekileyo ezihanjelweyo, iindlela zokukhangela, ubunini beapp, imbali yokuthenga, nokunye okunokubonisa ukuba ngubani umntu, ukhathalele ntoni, yintoni asokolayo nayo, kunye neziganeko eziphambili zobomi. Bexhotyiswe ngolu luvo lomeleleyo lukaGen Z kuzo zonke iindlela zabo, abathengisi banokubeka inkuthazo, bajolise ekuthengeni imithombo yeendaba, bacokise imiyalezo, kunye nomxholo womthungi-phakathi kwezinye izinto-ngokuzithemba okukhulu.
Ukwazi ukuba le datha ikho kwaye ayisixhasi kufuneka ukhethe ngokuzithandela ukungabaqondi abathengi. Oko kwathethi, ayisiyiyo yonke imithombo yedatha yokuziphatha yedijithali eyenziweyo ilingana. Eyona ilungileyo yile:
Khetha ukungena, Ithetha ukuba iphaneli yabathathi-nxaxheba ngokwazi iyavuma ukuba isimilo sabo siqwalaselwe, kwaye kukho ukutshintsha kwexabiso phakathi komphandi nomthengi.
Longitudinal, kwimisebenzi ebekwe esweni ixesha kunye nexesha, elinokuthi likhanyise ukuthembeka okanye ukungabikho kwako kunye nolunye uhlobo.
I-Robust, Ukwenza ipaneli yokuziphatha eyoneleyo ngobukhulu ukuhambisa isampulu emele imisebenzi yabathengi yedijithali kunye nedatha eyaneleyo yohlobo lwakho ukuze isebenze kuyo.
Isixhobo se-agnostic, Ukubonelela ngesakhono sokujonga i-desktop kunye nokuziphatha okuhambayo.
Ubungqina becookie, Intsingiselo yokungaxhomekeki kwikuki, eya kuba yimfuneko kungekudala.
Njengoko uGen Z eqhubeka nokuvela, unxibelelwano lwabo nommandla wedijithali luza kudlala indima ebalulekileyo ekufundiseni abathengisi ngendlela yokuziguqula, ukufumana ukuthembela kwabo nokwakha ubudlelwane obuhlala buhleli. Olona hlobo lubalaseleyo luza kwamkela le nkalo intsha yedatha njengobungakanani obutsha benzuzo yokhuphiswano, hayi kuphela kwizicwangciso zokulola ezijamelene noGen Z, kodwa nabaphi na abantu ekujoliswe kubo.
tags: Ukuqonda kwabaphulaphuliIdatha yokuziphathacookiesijelo elinqamlezileyoidatha yokuziphatha yedijithaligen zisizukulwana zizizukulwanaidatha yendawomillennialsukhethe kuukulungiswa
Qwilr: Uyilo loXwebhu lweQonga lokuGuqula ukuThengisa kunye nokuBambisana kweNtengiso